ငါတို့သည်သင်တို့ Viriyah, ထိုင်းအကြီးဆုံးကားကိုအာမခံပေးသူနှင့်အတူလမ်းများပေါ်တွင်ဖုံးလွှမ်းရရှိပါသည်။
ဘန်ကောက်မြို့သို့မဟုတ်ပင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကားကိုငှားရမ်းရှာပါ။ ရီးရဲလ်ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ကားတွေထွက်ငှားရမ်းကြသည်, သင်တည်နေရာ, စျေးနှုန်း, အောင်နှင့်အင်္ဂါရပ်များအားဖြင့်ရလဒ်တွေကို filter နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါငှားရမ်းခြင်းနှင့်ကားကိုပိုင်ရှင်တစ်ဦးသွားလာရင်းယနေ့ RentaCar Club ပေးစိတျထဲတှငျသငျနှငျ့အတူတက်မြေပြင်ကနေတညျဆောကျ!
ဒါဟာ 1-2-3, 1. ထိုင်း၌သင်တို့၏ရက်စွဲများနှင့်တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ 2. သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကားကိုရှာပါ 3. သင့်ကားငှားရမ်းအစစ်အမှန်ပိုင်ရှင်များထံမှဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။ ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးကသင်၏တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံပြီးတာနဲ့ဘွတ်ကင်ကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။ RentaCar Club သင်အကြိုက်ဆုံးကားကိုငှားရမ်းနှင့်အတူအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လွယ်ကူသည်။
ထို့နောက်ရုံ, ကားစစ်ဆေးခြင်းသော့တွေစီးပျော်မွေ့ထိုင်း၌သင်တို့၏ကိုရွေးပါတည်နေရာမှာကားတစ်စီးပိုင်ရှင်တွေ့ဆုံရန်! အားလုံးငှားရမ်းခြင်းပဲသငျသညျကားပိုင်ရှင်မှကားပြန်လာမတိုင်မီဓာတ်ငွေ့လောင်စာကန်သွင်းထားဖို့သတိရပါ, ပြည့်စုံအာမခံနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။